Owayengunobhala welizwe lase-US uColin Powell usweleke kwi-COVID-19 eneminyaka engama-84
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Owayengunobhala welizwe lase-US uColin Powell usweleke kwi-COVID-19 eneminyaka engama-84
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Owayengunobhala welizwe lase-US uColin Powell usweleke kwi-COVID-19 eneminyaka engama-84.
UPowell wadana ngenxa yokuhamba kweqela lakhe ukuya ngasekunene kwaye waxhasa esidlangalaleni uBarack Obama kwibhaso lakhe lobongameli. UPowell ukwamkele ulonyulo lukaJoe Biden lokukhokela ilizwe, esithi uza kuba "ngumongameli sonke esingazingca ngokukhahlela."
U-Colin Powell oswele umhlala-phantsi weenkwenkwezi ezine osele esidla umhlala-phantsi, usweleke ngenxa yeengxaki ezivela kwi-COVID-19.
UColin Powell wayefumana unyango kwiZiko lezeMpilo likaWalter Reed.
UColin Powell wayefumene ukuba une-myeloma emininzi.
UColin Powell, owaziwayo kwiRiphabhlikhi, owayengumntu wokuqala wase-Afrika ukuba asebenze njengo Unobhala Wezwe wase-USUsweleke eneminyaka eyi-84, ngenxa yeengxaki ezivela kwi-COVID-19.
Igqala elineminyaka engama-35 lomkhosi wase-US, owaphakama wangena kwinqanaba leenkwenkwezi ezine ngaphambi kokungena kwezopolitiko, wayefumana unyango kwiZiko lezeMpilo likaWalter Reed, xa eswelekile, usapho lwakhe lubhengeze namhlanje kwisithuba iphepha lakhe kuFacebook.
"Siphulukene nomyeni notata, utatomkhulu kunye nomkhulu waseMelika," batsho, bongeze ukuba ugonywe ngokupheleleyo i-COVID-19, kodwa ekugqibeleni yathatha ubomi bakhe.
Intsapho kaPowell yabulela abasebenzi bezonyango “ngonyango lwabo.” Unobangela wokufa kwathiwa "yingxaki evela kwi-COVID-19." Udlule ekuseni ngentseni yangoMvulo.
Umphathi weenkwenkwezi ezine odla umhlala-phantsi kwafunyaniswa ukuba une-myeloma emininzi, ngokweengxelo zeendaba, uhlobo lomhlaza wegazi othintela amandla omzimba wokulwa nosulelo.
UColin Powell wasebenza njengosihlalo weeNtloko zabasebenzi, isikhundla esiphezulu kwezomkhosi kwiSebe lezoKhuselo laseMelika, phantsi kukaMongameli uGeorge HW Bush, kwaye wayengoyena mntu mncinci kunye nomntu wokuqala wase-Afrika ukubamba isikhundla.
UPowell wade watyholwa ngokuba ngumongameli wokuqala omnyama wase-US, emva kokuduma kwakhe kwanda emva kwephulo elalikhokelwa yi-US ngokuchasene nokuhlasela kukaSaddam Hussein e-Kuwait ngo-1990.
Kamva wakhonza njengowokuqala kaGeorge W. Bush Nobhala ka Rhu lumente kwaye, ngelo xesha, waba lelona gosa liphezulu likarhulumente labantsundu. Ngo-2003, uPowell wenza ityala lakhe lokuhlasela i-Iraq kwiZizwe eziManyeneyo, ecaphula ubukrelekrele obabuphosakeleyo bokuba u-Hussein's Ba'athist umbuso wayegcina izixhobo zentshabalalo.
Kwifoto yomfanekiso ngoku, wayephethe ibhotile yemodeli ye-faux anthrax phambi kwe-UN General Assembly, kodwa wayeza kuwamkela lo msitho njenge "blot" kwirekhodi yakhe. Okulandelayo yaba yimfazwe eyonakalisayo yeminyaka esibhozo.
Kuqikelelwa ukuba ngaphezulu kwesigidi seIraq siphulukene nobomi babo kubundlobongela okanye ngenxa yokuhluthwa okubangelwe lolo hlaselo, kwaye amawaka amajoni aseMelika asweleka ngexesha lezinto zaseMelika eIraq. Iziphumo zolo hlaselo zikhokelele kubundlobongela obuxhaphakileyo bamahlelo kunye nokunyuka kwe-Islamic State (IS, eyayisakuba yi-ISIS).
UPowell waphoxeka kukuhamba kweqela lakhe ukuya ngasekunene kwaye waxhaswa esidlangalaleni UBarack Obama kwilinge lakhe lobongameli.
UPowell ukwamkele ulonyulo lukaJoe Biden lokukhokela ilizwe, esithi uza kuba "ngumongameli sonke esingazingca ngokukhahlela."
UPowell wayenabantwana abathathu kwaye ushiye ngunkosikazi wakhe, uAlma, awatshata naye ngo-1962.